Pipe Square e Moscow
Osabalalayo-isiyingi isakhiwo isimiso wemizi yasendulo - isici ukuthuthukiswa imizi yasendulo futhi eMoscow ngokukhethekile. Kusukela maphakathi emzaneni - izindonga ezibiyele - ekwandiseni edolobheni ukuze buyela zonke izindonga ezintsha ukuzivikela. Lokhu kwakuwumnikelo ka-imfuneko ukuvela eziningi izigcawu eMoscow, kuhlanganise Pipe.
Pipe endaweni: umlando nesenzakalo
Ekupheleni kwekhulu XVI loMfula emfuleni Neglinka , indawo entsha igudle ke yamisa udonga White City. Ukuze abhubhise emfuleni kusiteshi sayo engxenyeni engezansi odongeni yayenziwa umgodi ukuthi abantu maduze waziwa njengomzalwane ipayipi. Eduze ophumayo we 'pipe "itholakala Pipe emakethe lapho ukuthengisa izinkuni, amabhodi, izingodo, futhi ngisho yonke log-indlu - konke okudingekayo ukuze kwakhiwe.
Lapho ngasekupheleni kwekhulu XVIII ladilizwa udonga White City, e Neglinka steel yokulahla imfucuza, maduze emfuleni waba kudoti wendawo. Ukuntuleka kwenhlanzeko isimo sezwe yafuna kokungenela esiphuthumayo iziphathimandla, futhi uCatherine II ngaphambilini ukuhlomisa insimu, oblitsevat ogwini Neglinka e egwadle nemithombo kanye isethi Yiqiniso. Iphrojekthi ayifakiwe, emlanjeni eyayifihliwe komhlaba ku kwesigubhu. Kwezinye izindawo, kwakukhona abancane isakhiwo iziza khulula. Omunye wabo kwakungu-indawo lapho kamuva uzobe aliveza Pipe endaweni: nje phakathi umbala yesimanje, Petrovsky futhi Rozhdestvensky Boulevards.
Okuyingozi empilweni Pipe
Kuyathakazelisa ukuthi esigcawini XIX leminyaka emzini ukudlala indima yokuba ezokuthutha ihabhu elikhulu lesimanje: kungenca Wadlulela ngowokuqala zamahhashi tram komzila. Nokho, ukukhuphuka entabeni tram endaweni kwaba nzima, nzima hudula amahhashi enqoleni ayengakwenza kuphela isiqalo egijima. Once in the trams competi XX leminyaka indawo, hhayi umlando ishintshile. I izingozi njalo wabulala abahamba ngezinyawo, ngezinye izikhathi walimala futhi abagibeli.
Ngakusasa isikhashana mlando okubili okwenzeka Lokukhumbula nakakhulu uhlala Pipe Square, baye exhumene ne hambisa lapha kuqala "flower embhedeni" - emakethe imbali kusuka Red Square, bese emakethe inyoni. Futhi inyoni Muscovites wathenga hhayi kuphela ukusetshenziswa kodwa futhi ngezinhloso zezenhlalakahle - sezidedelwa zaya endle.
Ngo abantu, kule ndawo isikhathi eside yayingenamhlabathi idumela elihle. Emlandweni ke ngokuthi "obomvu-ukukhanya endaweni." Igama layo ithole ngokuqondene naye mayelana esixukwini esinesiyaluyalu lobugebengu kanye cocottes.
Ngaphezu kwalokho, "kwakunemikhaya eCrimea" futhi "isihogo" futhi "Isihogo".
"ECrimea" - a eziyinkimbinkimbi ezizindeni ezintathu ezisemadolobheni ihlobene ukuphila zasendle izakhamuzi: zokudla, amahhotela kanye yezihambi.
Igama elithi "Shiyoli" - ingxenye yesibili eyinkimbinkimbi, kufinyeleleke kuphela "wangaphakathi". Lalinama amakamelo ezincane - "UQHUBEKELA" futhi amakamelo amakhulu - "kaDeveli Mill".
Kwazanywa komhlaba ingxenye - yokudlela "Isihogo", okuyinto wayeya isixuku kuyingozi kakhulu. Lapha, udlala amakhadi imali futhi ukuphila, ukuphuza uphuzo, bamukela endaweni abadingisiwe iziboshwa, axazulula izinkinga, okunganambitheki kuhulumeni.
Kuyinto kusuka endaweni Pipe ezihlobene izenzakalo ezibalulekile zokuphila edolobheni sezombusazwe: the icebo lokubulala inkosi, futhi kwakukhona ukufa sabantu enhloko-dolobha besendleleni eya emngcwabeni Iosifa Vissarionovicha Stalina.
Isikhumbuzo kuya Pipe
Ngo-1994, ngesikhathi Itshe Pipe Square wavulwa e Moscow "Ukujabula Russia - amasosha komthetho, owashona ngo-lisemsebenzini." Lo mcimbi ufingqa konke okungenhla. Phela, le ndawo - indawo kwegazi e-dolobha, zabulala hhayi kuphela izakhamuzi, kodwa futhi bezibheka umthetho, sizama ukubuyisa ukuthula gangster ekhoneni eMoscow. Abalobi tshe - A. V Kuzmin kanye AA Bichukov.
Isikhumbuzo yakhelwe waseRoma ukunqoba ikholomu kushaft okuyinto usakaze ngethusi. Ikholomu igibele wangenela egwadle base isinyathelo lihlotshiswe bas-imifanekiso. Omunye wabo ebonisa umama usosizini umzimba indodana oshonile.
On ikholomu efakwe sibalo St Georgiya Pobedonostsa ukubulala nesijula inyoka. ebaziwe kufanekisa isobala: Georgiy Pobedonosets limelela iqhawe komthetho, kanye nesihlungu - izigebengu nabo lwempi futhi uwina njalo. Kufanele kuqashelwe ukuthi isithombe kuyinto non engamukelwa - Georgiy Pobedonosets uvezwa hhayi njengoba umgibeli ihhashi kanye neqhawe ukuma yayilahla unyawo inyoka-isitha.
Ukuphakama ikholomu ifinyelela 32,5 m, 15.5 m ngezansi ikholomu abadumile Alexander Petersburg.
Njalo ngonyaka eduze lesikhumbuzo ukuze imemori sihamba Buka lapho uya eMoscow amaphoyisa aphinde abeke izimbali - esikhumbuzo sabantwana abavikeli we umthetho.
Izikhangibavakashi Pipe Square
Pipe ekhoneni isikwele kanye Neglinnaya emgwaqweni itholakala isakhiwo mlando, okuyinto iwuMnyuziyamu School of Drama Modern. Ngaphambili, kusayithi kwalesi sakhiwo kwaba esitodlwaneni ugwayi, futhi ngekhulu XIX kuya Umklamo Chichagova eyakhelwe kulendlu yayizosetshenziselwa yokudlela imfashini French "Hermitage" lapho lidonsa abantu bazo zonke elite ahlukile eMoscow. Kulapha bakhanya ngobuciko babo udumo chef futhi umsunguli Lyusen Olive.
Le ndawo yokudlela ehlangene egameni Antona Pavlovicha Chehova, ngubani usayine inkontileka lapha kanye edume ncwadi umshicileli Suvorin uzitholele iqoqo eliphelele imisebenzi yakhe.
Kodwa indlu ekhoneni kunothile Golovin Lane yigama komlando "Indlu caryatids abaye bakhulelwa." Iyisonto omunye ethandwa kakhulu yezifebe ahlukile eMoscow.
Eduze, phezu Boulevard anemibala, itholakala esekisini abadumile Nikulin.
Kanjani ukuze uthole Pipe Square? Indlela elula kunazo ukuhamba - eMoscow Metro: esiteshini "Pipe Square" noma "Umbala Boulevard".
Futhi hhayi ukudida lutho, ukukunikeza look kusengaphambili lesi sithombe Pipe ndawo.
A uhambo emnandi futhi akusoze kwalibaleka!
Petrin Tower ePrague: kanjani lapho?
Amadodana uGenghis Khan. Batu Khan - indodana ka uGenghis Khan
Kanjani ukuze aqonde ukuthi yini ubuciko?
Spoon Volkmann: incazelo nobukhulu
Izingubo Okudumile e Wikimart, ukubuyekezwa online shopping kanye ukubukwa yabathengi imikhiqizo ahlinzekwa.
Quest Pistols Bonisa: ukwakheka kanye nesakhiwo iqembu wamanje